qof madax kale gashan
Dhaantada Calanka Ugaaslabe
(Bani-Jacfarland National Dhaanto)
USA, 3 Mar 2015 (Alldhooftinle.com)
Dhaktar Talyaani Ah Ayaa Ku Guuleystey Inuu Qof Madaxiisa Oo Dhan Ku Bedlo Qof Kale Madaxiisa.
Dhakhtar Talyaani ah oo la yiraahdo Sergio Carnavaro ayaa sheegay inay ku guuleysteen tijaabo ku saabsanayd in la bedelo madaxa bani aadmiga. Dr. Carnavaro ayaa sheegay in laba sano ka dib ay suuragal noqon doonto in qofkii dhibaato ka haysato madaxa laga bedelo karo madaxa oo dhan isla markaana loo gelin doono madax qof dhintay.
Dr. Carnavaro oo mudo badan daba joogay arintan wuxuu sheegay inaanay howl yareyn in madaxa bani aadmiga la bedelo, wuxuuna sheegay in dhibaatada ugu weyni ahayd sidii madaxa qofka dhintay looga ilaalin lahaa inuu dhinto.
"Waxaan ku dadaalay oo ku dadaalay inaanu madaxu isbedelin ogsajiin la'aan, waana ku guuleysanay," ayuu yiri Dr. Carnavaro.
Wuxuu intaa ku daray in qoorta maydka si cilmiyaysan loo goyn doono iyadoo la ilaalinayo neerfayaasha iyo lafdhabarta, dhamaan xididida waa la ilaalin, waxaana lagu nadiifin kiimiko la yiraahdo polyethylene glycol, taasoo ilaalin doonta in wax kasta sidooda ahaadaan mudo dheer. Dhinaca kale qofka madaxa loo gelinayo ayaa si taxader leh hadba xidid iyo neerfe loo goynayaa, iyadoo xididkii la gooyoba lagu talaalayo madaxa cusub ee loo gelinayo, ayuu yiri Dr. Carnavaro.
Marka qaliinku dhamaado waxaa qofka bukaanka lagelinayaa kooma 3 ilaa 4 todobaad, si aanu u dhaqdhaaqin oo xididada iyo neerfayaasha la talaalay u ruxmin. Laakiin arinkan madax bedelka ah ma aha arin qof walba haweysan karo, waxa laysku raacay inuu ugu yaraan ku kacayo 13 milyan doolar.
Yaasiin Maxamuud Bin Jacfar AlMakhzuumi